အမေရိက | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 181
လက်ရှိမြန်မာ့အရေး ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ အမြင်နှင့် သုံးသပ်ချက်များ အရှင်ပညာနန္ဒ၊ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စနှင့်ပက်သက်ပြီး ရွှေည၀ါဆရာတော်၏အမြင် တရားပွဲများပိတ်ပင်ခံရမှုအပေါ်ရွှေည၀ါဆရာတော်အမြင် No tags for this post.
ကာတွန်း စောငို – ၂/၈၈ မလိုဘူး၊ ဆက်လုပ် … ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ (Cartoon Saw Ngo – Regime withdrew 2/88 but still arresting protesters) No tags for this post.
နေ့ လည်ခင်းများ ဇေမှိုင်း၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ မပြောတတ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ပြောတတ်လို့ပြောတာပါ သူငယ်ချင်းက ပြောတယ် အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး … ဒီလိုပါ … အဲဒီလိုပါ … နှစ်ကာလများစွာကိစ္စ ခဏခဏ ကြားနေရ စာတတ်တွေ ကိုယ်တိုင်က အလျားလိုက်ကူးနေကြ။ ငိုတတ်တဲ့ကလေး နို့ ရ ဆိုပါသော်ကောကွယ် ငိုတိုင်းသာ ငြိမ်းချမ်းရမယ်ဆိုရင် မှိုင်း နဲ့ အဘအုန်းမြင့်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးမြင်သွားရတာကြာပကောကွယ်။ ညတွေ...
အစိုးရ၏ သံဃာ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့က အရေးယူမှုအပေါ် မကွေးကျောင်းဆရာတော်သဘောထား အရှင်ပညာနန္ဒ၊ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ မကွေးကျောင်းဆရာတော် ဦးပါမောက္ခအား OIC ရုံး မြန်မာနိုင်ငံကို အခြေမစိုက်ဖို့အရေး ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့မှုနှင့် လက်ပတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်မှုကို ရှုတ်ချသည့် ဆန္ဒပြပွဲများမှာ ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က ဆရာတော်အား မြို့နယ်သံဃမဟာနာယက အကျိုးတော်ဆောင်ရာထူးနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိဟု သုံးသပ်ကာ ထုတ်ပယ်လိုက်သည့်အပေါ် ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်၏ သဘောထားကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ No tags for this post.
မန္တလေးက ဆွမ်းအလှူရှင် အရှင်ပညာနန္ဒ၊ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၃၀၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်မှာ ၁၈၊ ၃၂) အောင်ဒင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃ အပိုင်း (၆) လွှတ်တော် နှင့် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ရေး ဥပဒေ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီးသားဖြစ်တဲ့ “ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ” ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အမှတ် ၁ အဖြစ်နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇူလိုင်လမှာ နည်းဥပဒေ ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒီဥပဒေ ရဲ့ အနှစ်သာရကတော့ တိုင်းပြည်ဖွဲ့စည်းမှုရဲ့...
Page 181 of 195«1...179180181182183...195»
မင်းငြိမ်းအေး – ပျင်းရိခြင်းအကြောင်း https://t.co/fkOsFIxUXZ https://t.co/IdRiANOBAn about 21 minutes ago ReplyRetweetFavorite